5 Na yenim sɛ sɛ wodwiriw yɛn asase so ofie,+ ntamadan+ yi, gu+ a, yebenya dan bi a efi Onyankopɔn hɔ, ofie a wɔamfa nsa ansi+ a ɛwɔ hɔ daa+ wɔ soro. 2 Na ofie a yɛte mu yi mu na yesi apini,+ na yɛn ani agyina sɛ yɛbɛhyɛ nea efi soro a ɛyɛ yɛn dea no,+ 3 sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yenya hyɛ a, wɔrenhu yɛn sɛ yɛda adagyaw.+ 4 Nokwasɛm ne sɛ yɛn a yɛte ntamadan yi mu no si apini bere a nneɛma hyɛ yɛn so no; efisɛ yɛmpɛ sɛ yeyi gu hɔ, nanso yɛpɛ sɛ yɛhyɛ biako no,+ na nkwa amene nea ewu no.+ 5 Na nea wasiesie yɛn ama eyi ne Onyankopɔn+ a wama yɛn nea ɛrebɛba no ho sɛnkyerɛnne,+ honhom+ no. 6 Enti yɛwɔ akokoduru daa, na yenim sɛ bere dodow a nipadua no ne yɛn tenabea no, yenni Awurade nkyɛn,+ 7 efisɛ yɛnam gyidi mu, na ɛnyɛ nea yehu mu.+ 8 Nanso yɛwɔ akokoduru, na yɛn ani gye ho mmom sɛ yebefi nipadua mu na yɛne Awurade akɔtena.+ 9 Enti yɛde reyɛ yɛn botae nso sɛ, sɛ yɛwɔ ne nkyɛn oo, yenni ne nkyɛn oo+, yɛbɛsɔ n’ani.+ 10 Na etwa sɛ wɔda yɛn nyinaa adi wɔ Kristo atemmu agua anim,+ na obiara anya nea ɔnam nipadua no so yɛe ho akatua, sɛ́ ɔyɛɛ papa anaa ɔyɛɛ bɔne.+ 11 Enti esiane sɛ yenim Awurade suro+ nti, yɛkɔ so ne nnipa kasa ma wɔte ase,+ na Onyankopɔn anim na wɔada yɛn adi. Nanso migye di sɛ wɔada yɛn adi mo ahonim+ nso mu. 12 Ɛnyɛ sɛ yɛredi yɛn ho adanse+ akyerɛ mo bio, na mmom yɛrema mo nea mubegyina so ahoahoa mo ho wɔ yɛn ho,+ na moanya mmuae ama wɔn a wɔde nea aniwa hu hoahoa wɔn ho+ sen sɛ wɔde nea ɛwɔ komam bɛhoahoa wɔn ho+ no. 13 Na sɛ yɛabɔ dam+ a, yɛabɔ ama Onyankopɔn; na sɛ yɛn adwenem da hɔ+ a, emu da hɔ ma mo. 14 Na ɔdɔ a Kristo wɔ no hyɛ yɛn, efisɛ eyi ho na yɛabu atɛn, sɛ obiakofo wu maa obiara;+ ɛnde na obiara awu; 15 na owu maa obiara na wɔn a wɔte ase no antena ase amma wɔn ho bio,+ na mmom wɔatena ase ama nea owu maa wɔn+ na wonyan no+ no. 16 Enti efi saa bere yi rekɔ no yennim obiara ɔhonam mu.+ Sɛ mpo na yenim Kristo ɔhonam mu+ a, afei de, yennim no saa bio.+ 17 Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a, na ɔyɛ abɔde foforo;+ nneɛma dedaw no atwam,+ hwɛ! nneɛma foforo na aba.+ 18 Na nneɛma nyinaa fi Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata yɛne no ntam+ na wama yɛn mpata som adwuma+ no hɔ, 19 kyerɛ sɛ, ná Onyankopɔn nam Kristo so+ repata wiase+ bi aba ne nkyɛn+ a ommu wɔn mfomso ngu wɔn so,+ na ɔde mpata asɛm+ no ahyɛ yɛn nsa.+ 20 Enti yɛyɛ+ ahemmɔfo+ a yesi Kristo ananmu,+ te sɛ nea Onyankopɔn nam yɛn so resrɛ.+ Yegyina Kristo ananmu srɛ sɛ:+ “Momma wɔmpata mo mmra Onyankopɔn nkyɛn.” 21 Nea na onnim bɔne no,+ ɔde no yɛɛ bɔne+ maa yɛn, na yɛnam no so ayɛ Onyankopɔn trenee.+